उपत्यकासहित देशका विभिन्न शहरमा वायु प्रदुषण बढ्याे - नेपालबहस
उपत्यकासहित देशका विभिन्न शहरमा वायु प्रदुषण बढ्याे
| ११:४७:३५ मा प्रकाशित
११ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा वायु प्रदुषण बढेको छ । वातावरण विभागका अनुसार प्रि–मनसुनको समयमा औषत भन्दा निकै कम वर्षा तथा डढेलो र औद्योगिक गतिविधिका कारण पछिल्ला दिनहरुमा वायु प्रदुषण बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
विभागका अनुसार पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरसहित हेटौँडा, विराटनर, सिमरा, जनकपुर, धनगढीलगायतका क्षेत्रमा वायु प्रदूषण बढेको छ। वायुको गुणस्तर एयर क्वालिटी इन्डेक्स ‘एक्वुआई’मा मापन गरिन्छ।
एक्वुआई ५० सम्म हुनु राम्रो हो, ५० देखि १०० सम्मलाई मोडरेट मानिन्छ। एक्वुआई १५० सम्म पुग्दा संवेदनशील समूहलाई अस्वस्थकर हुन्छ। २०० सम्म पुगे सबैका लागि अस्वस्थ हुन्छ। एक्वुआई ३०० पुग्नु भनेको जोखिमपूर्ण हो। ३ सयभन्दा माथि जानुचाहिँ घातक हो। विभागका अनुसार मंगलबार सिमराको एक्वुआई ३०० पुगेको थियो भने हेटौंडामा २५० पुगेको थियो।
तत्काल वायुमा रहेको धुलोको कण सफा गर्ने गरि पानी पर्ने वा त्यसलाई बढार्ने गरि हावा चल्ने सम्भावना नदेखिएको विभागले जनाएकाे छ । अहिले पानी परेको छैन, तर बदली भएको छ। हावा आइरहेको छ। मौसम धुम्मिएको छ। धुलोका कणहरु पनि आएका छन्। तत्काललाई वर्षा भएर सफा गर्ने खालको मौसमी प्रणाली छैन।
यो वर्ष मार्च महिना ‘२४ सम्म’ मा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ६.६ मिलिमिटर पानी परेको छ। मार्च महिनाको औषत वर्षा ३४.२ मिलिलिटर हो। यो वर्ष प्रि–मनसुनी गितिविधि विगतका वर्षमा जस्तो सक्रिय नहुँदा निकै कम पानी परेको उनले बताइन्।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार एक्यूआई ३०० सय भन्दा बढि भएमा मानव स्वास्थ्यका लागि विपदको अवस्था मानिने छ। बुधबार बिहान सिमराको एक्यूआई ३०५ मापन भएको छ।
आगलागी नियन्त्रणका लागी हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न ओलीकाे निर्देशन २ हप्ता पहिले
फेरि देशभरि ह्वात्तै बढ्यो वायु प्रदुषण २ हप्ता पहिले
आकाशकाे तुवाँलोले आन्तरिक र वाह्य उडान प्रभावित ३ हप्ता पहिले
ह्वात्तै बढेको वायु प्रदुषणको सुचकाङ्क क्रमशः घट्दै ३ महिना पहिले
वायु प्रदुषणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २० मिनेट ठप्प ! ३ महिना पहिले
वायु प्रदुषण बढी भएको स्थानमा कोरोना जाेखिम उच्च ५ महिना पहिले
सोमबार पाँच अर्ब २० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल विक्री हुने ९ मिनेट पहिले
धादिङको गजुरीमा दुई हेलिकोप्टर आकस्मिक अवतरण ११ मिनेट पहिले
नेपाल समूहद्धारा आयोगमा लिखित निवेदन दर्ता १८ मिनेट पहिले
स्याङयोङ्गको आईएमएस मोटर्सले ल्यायो नव वर्ष अफर ३६ मिनेट पहिले
विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० लाख नाघ्यो ४० मिनेट पहिले
जापानद्वारा फाइजरलाई थप खोप आपूर्तिको लागि आग्रह ४३ मिनेट पहिले
सङ्घीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्थापन समितिको भूमिका थप स्पष्ट गरिने ५२ मिनेट पहिले
कल्पनामा जस्तो छैन रानीमहल ९ घण्टा पहिले
सौर्य बत्ती जडानपछि भम्केनीधाम झलमल्ल, आवागमन सहज ११ घण्टा पहिले
साढे तीन वर्षपछि कांग्रेस सत्ता पक्षमा ७ घण्टा पहिले
फेरि बढ्यो पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य ! २४ घण्टा पहिले
त्रिभुवन आदर्श माविमा प्रजातान्त्रिक योद्धाको सम्झनामा अक्षयकोष स्थापना ४ घण्टा पहिले
लुम्बिनीमा जसपा संसदीय दलको बैठक आज बस्दै ९ घण्टा पहिले
बस आफैँ अनियन्त्रीत हुँदा ३१ जना घाइते २४ घण्टा पहिले
१५ वर्षीया सालीलाई जबरजस्ती करणी गर्ने भेनाजु जेल चलान ४ दिन पहिले
नभाल्नीको केही दिनभित्र ज्यान जान सक्ने चिकित्सकको चेतावनी ६ घण्टा पहिले
कुकुरको हत्या गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन ४ दिन पहिले
डढेलोले लाङ्टाङ निकुञ्जको २५ हेक्टर जङ्गल नोक्सान २ दिन पहिले
भजनीका जयबहादुर बुढा पत्रकारितासँगै कृषिकर्ममा १० घण्टा पहिले
के देउवामा पनि ओली चरित्र मौलाउँदै छ ? ६ दिन पहिले
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बालुवाटारमा जारी २ हप्ता पहिले
राखु भगवती कोत मन्दिर पुनःनिर्माण शुरु २ हप्ता पहिले
क्रान्ति नायक गिरिजाप्रसाद कोईरालाको ११ औं स्मृति दिवश ! ४ हप्ता पहिले
आज नेप्से ४ बजेसम्म खुल्ने, यस्तो छ कारण ? ३ हप्ता पहिले
कोभाक्स र द्विपक्षीय सम्झौताबाट अफ्रिकामा २ करोड ९१ लाख डोज खोप पुग्यो २ हप्ता पहिले
भैँसीगोठलाई विस्थापन गर्दै मर्दी पदयात्रामा खुलेको होटेल ७ दिन पहिले
माओवादीका ४ सांसद निलम्बन गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता २ हप्ता पहिले
कर्णालीका तीन मन्त्रीले दिए राजीनामा २ हप्ता पहिले
अनशनको तयारीमा रहेका अस्थायी शिक्षक पक्राउ २ वर्ष पहिले
बेलायतमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने नेपालीको सङ्ख्या ६३ पुग्यो ११ महिना पहिले
हावाहुरी : बर्षात अघि नै बासस्थानको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन २ वर्ष पहिले
भारत–अस्ट्रेलिबीचको अन्तिम टेस्ट क्रिकेटमा भारतकाे रोमाञ्चक जित ३ महिना पहिले